မြန်မာဖတ်စာ ဒုတိယတန်း ထည့်ထားဖြစ်ပါတယ်ဗျာ့။ | White Boy Learning Burmese
June 16, 2013 by Win Hein	11 Comments
11 thoughts on “မြန်မာဖတ်စာ ဒုတိယတန်း ထည့်ထားဖြစ်ပါတယ်ဗျာ့။”
June 16, 2013 at 02:34
အသစ်ပိုစ့်စောင့်နေပါတယ် ဆရာ သကြားလုံး။ 😛
July 3, 2013 at 00:47
ဟားဟား ဟုတ်ပါ :p
I really can’t believe it you can speak Burmese.You can also write myanmar blog better than me.I was shocked when I read blog u write in burmese.Could that be possible?Is that true?When I saw your uploaded speaking,oh! Excellent. It’s real,then I laughed aloud.Keep going ,now I enjoying to read your blog.
(forgive me ,I can’t type zaw gyi font in my computer(wins8) ,So I wrote this in English) See you soon.
You can write Unicode to me, bro. That’s what I write and then I convert to ZG 😀
ကိုဝင်းဟိန်း မဂ်လာပါ ကောမင့် ပြန်ရေးပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မြန်မာလိုသင်ချင်ရင် ကျနော့်ဆီလာခဲ့နော် ဟဲဟဲ ပျော်ချင်လို့ နောက်တာပါ။
Hi Ko Win Hein, it has beenapleasure to have come across your blog and your videos on YouTube. I am so impressed and inspired by such efforts and enthusiasm you have put in to learning Myanmar. One random thought that stroke me while I was watching your videos was I wished all the Myanmar people who were learning English could be as much conscientious as you. Anyway! Keep up the good work and wish you every success in your learning process. 🙂
ပထမဆုံးအကြိမ် လာလည်သွားပါတယ် ကိုဝင်းဟိန်း ။ ဆက်ပြီးရေးပါဦး ။ မြန်မာစာစိတ်ဝင်စားတာ တကယ်ဝမ်းသာပါတယ်း)
ကိုကြီး ၀င်းပိာန်း မင်္ဂလာပါနော်… ကိုကြီး ရေးထားတဲ့ မြန်မာစာ တွေ က မြန်မာ လူမျိုးတစ်ယောက်လိုပဲနော်. ကိုကြီးကို ကြည့်ပြီးတော့ ကျွန်တော်လည်း အင်္ဂလိပ် ဘာသာ ကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် တက်မြောက်ချင်တယ်ဗျ…… အကို လိုပဲ လေ့လာတော့မယ်ဗျား… မင်္ဂလာရှိသော နေ့ရက်လေးဖြစ်ပါစေခင်ဗျ
ချီးကျူးပါတယ်ဗျာ။ အရမ်းကိုကြိုးစား တဲ့ လူပါပဲ ဗျာ လေးစားပါတယ် …ဆက်ကြိုးစား နိုင်ပါစေ။။။